Taageero iyo wax la eegid waxaa loogu tala galay adigaaga si is daba joog ah, oo baahidaada waafaqsan ugu baahan taageero marka aad shaqo raadsaneysid. Caawimaad ayaad ka heleysaa gacanqabte ka socda mid ka mid ah qandaraaslayaasheenna. Gacanqabtuhu wuxuu kugu caawinayaa waddada aad ugu taagantihid shaqo ama waxbarasho.
Stöd och matchning waxaa loogu tala galay adigaaga shaqeyn kara, laakin u baahan taageero dheeraad ah si aad shaqo la’aanta uga baxdid. Iyadoo la kaashanaya gacanqabte waxaad heleysaa taageero si qof ahaan ah laguu waafajiyay oo kaa caawineysa in aad si degdeg ah u heshid shaqo ama waxbarasho. Waxaad tusaale ahaan caawimaad u heli kartaa in heshid iyo in aad raadsatid shaqo, in aad abuurtid dukumiitiyo codsi, xiriirro shaqabixiye, hagitaan waxbarasho- iyo xirfadeed, booqasho waxbarasho, luqad dhigid iyo wax kaloo badan. Usbuuc kasta ayaad wadahadal qof ahaaneed la leedahay gacanqabtahaaga.
Taageeradu waxay leedahay afar heer oo kala duduwan. Haddii aadan swiidhish ku hadlin waxaad fursad u haysataa in aad luqaddaada hooyo uga qeyb qaadatid.
Waxaad taageerada ka qeyb qaadaneysaa 3 bilood, dabadeed waxaan qiimeyneynaa sidi ay wax u dhaceen. Taageerada waxaan dheereyn karnaa 3 bilood, mararka qaarkoodna 3 bilood oo kale.
Haddii mid kamid ah 32 degmooyin aad deggan tahay, waxaad beddelkii kugu habboon adeegga Abaabulid iyo is-qabadsiin Rusta och matcha.
Degmooyinka laga helo fursadda adeegga Abaabulid iyo is-qabadsiin
Waa annaga cidda qiimeynta ku sameyneysa in taageerada iyo wax isla eegiddu ay kugu habboontahay, iyo heerka sida ugu fiican kuugu habboon.
Adiga ayaa awoodo xulashada Shirkadda adeeg-bixiya ah ee aad doonayso inaad isticmaasho. Halkaan weebka ayaa ka xulan kartaa. Waxaad sidoo kale ka raadsan kartaa qandaraaslyaasha aagga aad deggantihid, waxaadna tusaale ahaan ka eegi kartaa qaabka ay u shaqeeyaan, luqadahooda iyo aqoontooda faracyada shaqada. Sidii aan doorashada ku fududayno awgeed, waxaan is-barbardhignay natiijada adeeg-bixiyayaasha waxaana siinay heer u qaybin.
Waa inaad na wargelisaa Shirkadda adeeg-bixiya ah ee aad dooratay. Waxaan kaloo kaaga baahan nahay lambarka loo yaqaanno (KA-numret), kaasoo ku qoran hoosta magaca Shirkadda adeeg-bixiya ah.
Adiga iyo gacanqabtaha ayaa isla soo saaraya qorshe ku aaddan sida ugu dhakhsi badan ee aad shaqo ku heli kartid ama waxbarasho ku billaabi kartid.
Haddii aadan ku qanacsanayn caawinaadda lagu siiyay, waxaad xaq u leedahay inaad Shirkadda adeeg-bixiya ah iska beddesho. Xaaladas beddeladda darteed noola soo xiriir. Nala soo xiriir haddii aad u baahan tahay caawinaad ah in aad beddelatid.
Waxaad qaadan kartaa lacagta kaalmo dhaqdhaqaaq ah, lacag horuumarineed ama lacagta saldhigashada marka aad ka qeyb qaadaneysid taageero iyo wax isla eegid.
Waxaad ku jirtaa ceymisyada dhaawaca dadka- iyo nolosha kooxda marka aad ka qeyb qaadaneysid taageero iyo wax isla eegid.
Muddo dheer shaqo la’aan ahaa